Howlgalka Danab oo maalinkii labaad ka socda Garoowe iyo saraakiisha ciidanka oo ka hadlay(Dhegeyso)
Posted on August 18, 2016RBC, Wararka
Garowe-(RBC Radio)-Magaalada Garoowe ee Caasimada Dowladda Puntland ayaa waxaa maalinkii labaad ka socda howlgalka loogu magacdaray DANAB one (Danab kow) oo soconaya mudo 30 maalmood ah laguna dagaalamayo hubka sharci darada ah ee lagu wato magaalada iyo adkaynta amaanka Guud ee Caasimada Puntland.
Howlgalkaan oo lagu xaqiijanayo Amaanka Magaalada oo mudooyinkii danbe lagu arkay falal amni daro ayaa shalay ka bilowday Magaalada ayaa waxaa ka qayb-qaadanaya Ciidamada Difaca Puntland iyo kuwa PSF-ta.
Jimcaale oo ka waramayey khasaaraha ka dhashay xabado goos goos ah oo ka dhacayey Magaalada ayaa sheegay inuu jiro dhaawac labo qof oo mid kamid ah Askari yahay isagoo intaasi raaciyay in khaladaad jiri karaan balse ay ka faa’iidaysan doonaan islamarkaana sixi doonaan,waxaana uu ku amray ciidamada inay ku sugnaadaan xeryahooda inta uu socdo howlgalkan.
“Habac weyn baa galay amniga magaalada, waddooyinkii baa la xirtay, bacahii ayaa noqday kuwo si xad dhaaf ah loogu xirtay baabuurta, runtii waa loo baahnaa in ciidamadan laga howlgaliyo caasumadda,”Ayuu yiri Xasan Goodir.
Guddoomiyaha gobolka Nugal Cumar Faraweyne ayaa isaguna sheegay sheegay in magaalada Garowe ay u simantahay umadda reer Puntland islamarkaana u furantahay dadka Somaaliyeed isagoo xusay inay maalgashan karaan sidaasi darteed loo baahanyahay inay amnigeedu noqdo mid la isku hallayn karo.
Gudoomiyaha Gobalka Cumar Faraweyne ayaa tilmaamay in ciidamadan yihiin kuwii howlgalka la galay Al Shabaab isagoo intaasi raaciyay inay diyaar u yihii sidii ay u tagi lahaayeen goob walba oo looga baahdo.
Magaalada Garoowe ee Caasimada Puntland ayaa mudooyinkii danbe waxaa kusoo badnayey falalka amni xumo iyadoo magaalada laga maqlayey xabado xafdhaaf u dhacaya waxaana howlgalkaan uu sidookale kusoo aadaya xili 24-ka bisha Sebtember la filayo in magaalada garoowe uu ka furmo shirarka lagu soo xulayo aqalada Baarlamaan ee Soomaaliya.
Halkaan ka dhegeyso codadka